यस्ता छन् जीवनभर निरोगी रहने केहि सूत्र - ज्ञानविज्ञान
ऋतुचार्यको अर्थ ऋतु अनुसार जीवनलाई डोहोर्‍याउनु हो । अर्थात प्राकृतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । प्रकृतिले हामीलाई यस्तो सन्देश दिइरहेको हुन्छ कि हामीले प्रकृतिको हिसाब अनुसार आफु स्वय्मलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । जाडो, गर्मी, झरी प्रकृतिमा जब ऋतु परिवर्तन हुन्छ, तब हामी स्वयम् परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्छ ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप र अन्य जीर्ण रोगीहरूले आहारविहारलाई ध्यान नराखी औषधि वा जडीबुटीको धुलो मात्र सेवन गर्दा प्रभावकारी हुँदैन । जडीबुटीको विश्वासमा परेर धेरै दिनसम्म खुला रहेका, म्याद नाघेका र गन्ध एवं स्वाद बिग्रेका औषधि प्रयोग गर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
Don't Miss it दशैँमा मासु खादै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
Up Next दशैँमा कस्तो मासु खाने ? र, कसरी आफ्नो तौल सन्तुलनमा राख्ने ? पढ्नै पर्ने टिप्स